လူပျိုရည်ပျက်ခဲ့ တဲ့ ဖြစ်ရပ် – Hlataw.com
ကျွန်တော် အမတယောက်က သူတို့မိန်းခလေးသူငယ်ချင်းတွေကြီးပဲ စုပြီး ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားသွားကြဖို့လုပ်တယ် ။ အဲ့တုန်းက ကျွန်တော် ရ တန်း ………. အမ က ပထမ နှစ်လား ဒုတိယ နှစ်လားတော့မမှတ်မိတော့ဘူး ။ သွားမယ့်လူတွေက အမနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း မိန်းခလေး လေးယောက် …. နောက်ထပ် အဲ့အထဲက သီတာ ဆိုတဲ့ အမကြီးတယောက်ရဲ့ ညီမပါတယ် ။ အနားနီးတော့မှ အဲ့အမကြီးရဲ့ ညီမက နေမကောင်းလို့ဆိုပြီး မလိုက်ဖြစ်တော့ဘူး ….ဒါပေမယ့် လက်မှတ်တွေက ၀ယ်ပြီးသွားပြီလေ …. တစောင်ပိုနေတာပေါ့ ။ အဲ့မှာ ကျွန်တော် လိုက်ဖို့ အခွင့်ကြုံတာပါပဲ…. ။ မေမေက အမ ကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ကျွန်တော့ကို အပ်လိုက်တယ် မောင်လေးကို ပါခေါ်သွားလိုက်ပေါ့ ။ လိုက်မယ့်အထဲက အမကြီး နှစ်ယောက်က ကျွန်တော်နဲ့ တော်တော်ခင်ပါတယ် အ်ိမ်နီးနားချင်းတွေပဲလေ ကရင်မတွေဆိုတော့ အပြောအဆိုကြမ်းချက်ကတော့ ” ၉ ” လောက်ရှိပါတယ် ။သူတို့ ဆုံရင်ပြောလိုက်တဲ့ စကားက ၃ပေအထက်ကိုမတက်ဘူး ခါးအောက်ပိုင်းတွေကြီးပဲစကြ နောက်ကြတာ ။ ကျွန်တော့ကိုလဲ ခလေးဆိုတော့ လူရာမသွင်းဘူးထင်တယ် ။
နောက် နှစ်ယောက်က လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့မှရင်းနှီးမိတာ တယောက်က မဲမဲ၀၀ပုပု စဉ့်ထူထူသုပ်ထားတဲ့မြေအိုးလိုပဲ မဲပြောင်နေတယ် …. မျက်နှာလဲ အရမ်းပြောင်တယ် ။ နောက်တယောက်က ဒေါင်ကောင်းကောင်း ဖင်ကြီးကြီး အသားဖြူဖြူ ရုပ်ကတော့ ရွက်ကြမ်းရေကျိုပါပဲ စကားပြောရင် ပဲနဲနဲများတယ် ပိုက်ဆံလဲရှိပုံရတယ် ။ ရုပ်နဲနဲတည်တယ် ။ သွားတာက ” ရန်ကုန် – ကျိုက်ထီးရိုး ” ဘုရားဖူးကားနဲ့ သွားတာပါ ။ ကားစီးတော့ နှစ်ယောက်ခုံတွေကိုအမနဲ့ စဉ့်အိုးက တဖက် ကရင်မနှစ်ယောက်ကတဖက် နောက်မှာက နှစ်ခုံတွဲမှာ ကျွန်တော်နဲ့ ” မသီတာ” ထိုင်တယ်….။ မိန်းမတွေဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း စားဖို့သောက်ဖို့တွေ တပြုတ်နဲ့ပေါ့ဗျာ………။ နေကြာစိ ဆတ်သားခြောက် အချင်ပေါင်းကစပြီး သကြားလုံး မကျီးတော်ဖီထိပါ တပြွတ်ပြွတ် တသွတ်သွတ်နဲ့ တလမ်းလုံးစားသွားကြတယ် ။ ခက်တာက မသီတာ သူက ကျွန်တော့ကို မောင်လေး ရော ဒါလေးစား ဟိုဟာလေးစားဆိုပြီး သကြားလုံးလေး ထိုးပေးလိုက် နေကြာစိလေး ခွာကျွေးလိုက် လုပ်နေတယ်လေ……။ တဖြည်းဖြည်းမိုးချုပ်လာတယ် ကားပေါ်က တီဗီ မှာပြတဲ့ အခွေလဲပိတ်သွားပြီ တီးလုံးသံငြိမ့်ငြိမ့်လေးကို တိုးတိုးလေးပဲဖွင့်ထားတယ်…… ကားပေါ်ကလူတော်တော်များများလဲအိပ်နေကြပြီ ညမိုးချုပ်လာတာနဲ့ အမျှလမ်းဘေး နှစ်ချက်ကလဲ မှောင်မဲလို့ အအေးလဲပိုလာတယ် ဒီတော့မှ ကျွန်တော်အနွေးထည်ထုပ်ဝတ်တယ် ။
ကရင်မနှစ်ယောက်ကလဲ အညာစောင်ကြီးနဲ့ ၂ ယောက်တွဲခြုံထားကြတယ်…. ကျွန်တော့ဘေးက မသီတာကလဲ သူ့စောင်ပါးလေးထုပ်ပြီးဘေးနားကွေးကွေးလေးလုပ်နေတယ် ။ နောက်သူကပြောတယ် ” ငယ်လေး ချမ်းလား စောင်ခြုံထားလေးတဲ့ သူ့ကိုယ်ပေါ်က စောင်တပိုင်း ကျွန်တော့ဆီလှမ်းခြုံပေးတယ် ” ကျွန်တော်လဲ တကယ်ချမ်းနေတာနဲ့ မငြင်းပဲ မသီတာခြုံပေးတဲ့စောင်ထဲ ခပ်ကွေးကွေးဝင်နေလိုက်တယ် ။ အဲ့မှာ သူက ကျွန်တော့ ပါးစပ်ကလဲပြော လက်ခါးကိုလှမ်းဖက်ထားလိုက်တယ် ” ချမ်းတယ်ကွ….” တဲ့ သူက ထွားတော့ သူလက်မောင်းကြီးက အိနေတယ် ကျွန်တော့ခါးကိုဖက်ထားတော့ အချမ်းပြေသွားသလိုပဲ ရင်ထဲနွေးသွားတယ်…….နဲနဲ ကတုန်ကရင်ကြီးဖက်ထားတဲ့လက်က ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော် တချက်တချက်သူ့ဖက်ကို ယိုင်ယိုင်သွားတယ် ။ ငိုက်နေတာကြောင့်လဲပါပါတယ်….. စိတ်ထဲက အားလဲနာမိတယ် သူ့ဘက်ကိုမယိုင်အောင် ကြိုးစားပြီးတော့ထိမ်းပေမယ့် မရတော့ဘူး အားနာနာနဲ့ပဲ မှေးခနဲအိပ်ပျော်သွားတယ်…..ခရီးသွားရတာ ပင်ပမ်းတယ်လေ သတိရတော့ မသီတာ ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲရောက်နေပြီ….. သူလဲ အိပ်နေတုန်းပဲ ။ နိုးနိုးချင်း ကျွန်တော် ထလိုက်တော့ … သူလဲ နိုးသွားတယ်ထင်တယ် ” ငယ်လေး အိပ်လေ … မောင်နှမတွေပဲ အားမနာနဲ့ ပက်လက်အိပ်မလား ” တဲ့ ” လာ ” ဆိုပြီး သူ မတ်မတ်ထိုင်လိုက်တယ် အထုပ်တထုပ်ကို ပေါင်ပေါ်တင်လိုက်တယ် ” လာ ပေါင်ပေါ်အိပ် ” တဲ့ အထုပ်ကို ခေါင်အုန်းပြီးတော့ ကျွန်တော်လဲ သူ့ပေါင်ပေါ်လှဲအိပ်လိုက်တယ်….သူ့ပေါင်ကြီးတွေက ဆိုဖာကြီးလိုပဲ အိအိကြီး အရမ်းအိပ်လို့ကောင်းတယ် ဒီလိုပဲ ခွေခွေခေါက်ခေါက်လေး ကျွန်တော် နောက်တကြိမ်ထပ်ပြီး အိပ်ပျော်သွားတယ်………. ။
( သေချာတာ အဲ့တုန်းက ဆက် ဆိုတာကို ကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူး… အဒေါ်တွေ ထိမ်းကြောင်းမှု့အောက်မှာ ညီမတွေအမတွေနဲ့အတူတူကြီးပြင်းခဲ့ရလို့ထင်တယ် အိမ်မှာအခွေကြည့်ရင် ကစ်ဆင်ဆွဲတဲ့ အခန်းပါနေရင်တောင် ရစ်ကြည့်ရတဲ့ အချိန်လေ အထိအတွေ့ဆိုတာ ကျွန်တော် တကယ်မသိခဲ့ဘူး…. ကျွန်တော် လူဖြစ်နာက်ကျတယ် ) အဲ့နေ့ကရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးရှိလို့ ၀တ်ထားတာကိုမှတ်မိနေတယ် အက်ဒီဒတ် မိုးကာသားအားကစားဘောင်းဘီအရှည်လေး ခါးရှုံ့ကြိုးနဲ့ ။ ကားပေါ်က အဲကွန်းကအေးအေးနဲ့ ဘယ်လောက်အိပ်ပျော်သွားလဲ မသိဘူး … ဘာမှန်းမသိတဲ့ ခံစားချက်တခုနဲ့ ကျွန်တော်နိုးလာတယ် ။ မသီတာပေါ့ … ကျွန်တော့ ဘောင်းဘီထဲ လက်ရောက်နေတယ်လေ ။ ကျွန်တော့ ညီလေးကို လက်ဝါးလေးနဲ့ မွမွချေလိုက် ဖွဖွပွတ်လိုက်နဲ့ အကြိုက်ဆော့နေတယ် ။ ကြိုးဖြေခံထားရတဲ့ဘောင်းဘီက ပွပွ ဆိုတော့ သူ့လက်က စိတ်ကြိုက်ဆော့လို့ရနေတယ် လွပ်လွပ်လပ်လပ်ပဲ ။အကိုင်ခံရတဲ့ ခံစားမှု့က တမျိုးကြီး ဘာကြီးမှန်းကို မသိတာ …. ခံလို့ကောင်းတာတော့ သေချာတယ် ။ ကောင်းကောင်းနဲ့ ကျွန်တော် ဆက်ငြိမ်နေမိတယ် ။ နောက် အတံလေးကို ရှေ့တိုးနောက်ဆုပ်လုပ်ပေးတယ် ….. ( အခုအသက်ကြီးမှ ဂွင်းထုတယ်လို့ခေါ်မှန်းသိတာ ) ကျွန်တော် မနေနှိုင်တော့ဘူး စိတ်ထဲကျိတ်ခံနေရတာ ခြေထောက်ချင်းချိတ်ပြီး ဖင်တောင်ရှုံ့နေပြီ…..။ မသီတာကြီး တဖြေးဖြေး ပိုဆိုးလာတယ် ကျွန်တော် နိုးလျှက်နဲ့ ညိမ်နေမှန်းသိလို့ထင်တယ် …..သူက ရဲ တာပေါ့ ။ အားလုံးလဲ အိပ်နေကြတယ် နောက်ပြီး စောင်ချုံထားတော့ ဘေးလူတွေ မတွေ့ရဘူးဆိုတာသေချာတယ်လေ ။ တချိန်လုံးအနှိပ်စက်ခံပြီးတော့မှ ကားက အစာပြေစားဖို့နေရာမှာခဏရပ်တယ်…..။
အောက်ဆင်းဖို့ထတော့ ကျွန်တော် မသီတာရဲ့ မျက်နှာကိုစေ့စေ့မကြည့်ရဲဘူး အရမ်းကိုမျက်နှာပူနေတယ် ။ စားသောက်ရင်း အမ တို့ကမေးတယ် ဘာဖြစ်နေတာလဲတဲ့ … ကျွန်တော် ကားမူးနေတာလို့ ပဲဖြေလိုက်တယ် စကားများများမပြောရဲဘူး ။ နောက်….. စားသောက်ပြီးတော့ ကားပေါ်လူတွေအကုန်ကားပေါ်ပြန်တက်လာတယ် ။ ကားကြီးဆက်ထွက်လာတော့ လူတွေက စစခြင်းတော့ ဆူဆူညံညံပေါ့… မကြာပါဘူး ခဏနေတော့ အရင်လို ပြန်တိတ်ဆိတ်သွားတယ် ။ အဲ့တော့မှ မသီတာ တစခန်းဆက်လာတယ် ……… ကျွန်တော် ရိုးရိုးပဲ ထိုင်နေတာပါ ဒါပေမယ့် သူ့က လက်ချင်းလာကိုင်ပြီး သူ့ပေါင်ပေါ်လက်တင်ပေးတမယ် …… သူ့ စိတ်ထဲ ကျွန်တော့ကိုစိတ်ကြိုက်ဆော့နေတယ်ထင်တာပဲ ။ သူ့ ထမီကို အပေါ်ထိ ဆွဲမပြီး ပေါင်ကြားထဲ လက်ထည့်ပေးတယ်…. ပေါင်ထွားထွားကြီးတွေ ထဲမှာ ပင်တီလေး အရည်တွေရွဲနေတယ် ။ ပထမ ကြောက်တယ်….နောက် ရှက်တယ် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျွန်တော့ကို အရှက်အကြောက်ထက် ထူးဆန်းတဲ့ခံစားမှု့က ဦးဆောင်သွားတော့တယ် ။ သိချင်စိတ်နဲ့ စူးစမ်းချင်တာရော မသိစိတ်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ခံစားမှု့တွေရော ရင်ထဲမှာလုံးထွေးနေတယ် ။ နောက်ဆုံး ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကွာဆို သူ့အထဲ လျှောက်ကိုင်ကြည့်တယ် သူလဲရသလောက် ပေါင်ဖြဲပေးထားတယ် ။
အရည်ပြစ်ချွဲချွဲတွေ သူ့ကြားထဲ ပေပွနေပါလား…… ပင်တီကြားထဲရသလောက် စမ်းကိုင်တယ် ဘေးကလျှိုပြီးလက်ခယ်တခုလုံး မြှုတ်အောင်သွင်းကြည့်တယ် ။ အဲ့စော်ကြီး အရမ်းထန်တာပဲ သူ့အရည်တွေ နဲတာမဟုတ်ဘူး ကျွန်တော့လက်ဝါးတခုလုံးပေပွနေအောင်ကို တစိမ့်စိမ့်ထွက်တာ ။ အားရအောင်ကိုင်ပြီးတော့ ကျွန်တော့လက်ကို ထုပ်လိုက်တယ်…. သူကလဲ စနိုးတာဝါနဲ့ ပွတ်ဆေးပေးတယ် ။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော့ကို သူကဖက်ထားတယ် ကျွန်တော်လဲ သူ့ရင်ခွင်ကြီးထဲ မှေးနေခိုင်းတယ်…။ ဒါနဲ့ပဲဆက်အိပ်တာနောက်တရေးထပ်ရသွားတော့တယ် ။ မသီတာက အိပ်နေတုန်း ကျွန်တော့ ဂျိုးလေးကို လက်က ကိုင်ပေးထားတယ်…။ ကိုင်ပါစေ အဲ့လို ကိုင်ထားတာ ကျွန်တော်လဲ ကြိုက်တတ်နေပြီ ……ဒီလိုနဲ့ပဲ ကင်မွန်းစခန်း ကိုရောက်လာတယ် ။ တောင်ခြေမှာခဏနားပြီးတော့ တောင်ပေါ်ကို ခြေလျှင်ပဲဆက်တက်ခဲ့ကြတယ် ။ လမ်းတောက်လျှောက် ကျွန်တော့ကို အမသူငယ်ချင်းတွေက၀ိုင်းစနေကြသေးတယ် ။ အမကိုလဲ ယောင်းမရေ ယောင်းမရေ နဲ့ ….. ဒီိလို လမ်းလျှောက်ရင်း လမ်းမှာ မသီတာကလဲ ကျွန်တော့ကို မထိတထိ စကားတွေပြောတယ်….. ပြီးတော့ …. လစ်ရင်လစ်သလို အထုပ်တွေ သယ်ရတဲ့ ကျွန်တော့ပေါင်ကြား ကို လာလာစမ်းတယ်…. ထိတယ် ။ တကယ်ပါ အထိအတွေရပြီး တောင်လာတော့ အရမ်းတိုင်ပတ်တာပဲ သယ်ရတဲ့အထုပ်တွေကိုရှေ့ကနေ ကာကာပြီးသယ်ရတာ ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်လေ။ သူကတော့ စလို့ကောင်း ရယ်လို့ကောင်းနေတယ် ။
တောင်တာတော့ တောင်တာပဲ ဒါပေမယ့် အဲ့တုန်းက ကျွန်တော်သူ့ကို စိတ်ထဲကနေ တကယ်တင်းနေတာ ။ ဒါနဲ့ပဲ တောင်ပေါ်ကို ရောက်သွားတယ် ……။ တောင်ပေါ်ရောက်တော့ တည်းဖို့ အခန်းလိုက်ရှာရတယ်အခန်းတွေက အထပ်သားနဲ့ကာပြီး ထမင်းဆိုင်နောက်တွေမှာဖွဲ့ထားတာ ။ ထမင်းဆိုင်မှာအခန်းယူပြီးတာနဲ့ အထုပ်တွေချပြီး အမ နဲ့ သူငယ်ချင်း ၃ ယောက် ( ကရင်မ နှစ်ယောက်နဲ့ ဟိုမဲမဲပုပု အမကြီး ) ပြီးတော့ ကျွန်တော်…. ရင်ပြင်ပေါ်တက်တယ် မသီတာက မလိုက်ဘူးလေ အရမ်းညောင်းလို့ဆိုပြီးနေခဲ့တယ် ။ ရင်ပြင်တော်ပေါ်ရောက်တော့ ဘုရားဝတ်ပြုပြီး အမနဲ့ ကျန်တဲ့လူတွေက ရင်ပြင်တော်ပေါ်ပတ်ကြည့်မယ်တဲ့ကျွန်တော်က မလိုက်တော့ဘူး အရမ်းညောင်းလို့ဆိုပြီး ပြန်လာခဲ့တယ် ….။ တကယ်က အကြောင်းရှိတယ်လေ… ဘာလို့ပြန်လာရလဲဆိုတာ……. စမိုင်း အခန်းထဲရောက်တော့ စောင်လေးခြုံပြီးတစောင်းလေးလှဲနေတဲ့ မသီတာကို ဖရောင်းတိုင်မီးမှိန်မှိန်လေးအောက်မှာ မြင်နေရတယ် ။ သူ့ အိပ်နေတာလား အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်တာလားတော့မသိဘူး… အနားကပ်တော့ အကြောလိမ်းဆေး တခုခုရဲ့ အနံ့သင်းလို့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ သူ့ဖင်ထွားကြီးတွေကို လက်ကကိုင်ညှစ်မိတယ်…… နောက် စောင်ပါးလေးကိုဆွဲလှန်လိုက်တယ် ။
အဲ့မှာ… သူပြုံးပြုံးလေးနဲ့ လှည့်လာတယ်…. ” ငယ်လေး မလိုက်သွားဘူးလား ” တဲ့ ” မဟုတ်ဘူး တမင်ပြန်လာတာ မကြီးနဲ့တွေ့ချင်လို့ ” ဆိုတော့ ” သူက လူလည်လေး ပဲ” တဲ့ …..။ ကျွန်တော် သူ့ပေါင်ကြားထဲ တန်းစမ်းလိုက်တယ် ( ကိုင်လက်စ ရှိနေပြီကိုး ) သူက ကျွန်တော့ကို လှမ်းဖက်တော့ ၂ ယောက်သား ကြမ်းပြင်မှာပဲ လုံးထွေးသွားတယ် ….. နောက်ပိုင်း သူ့ရဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ အနမ်းတွေ ကျွန်တော့ဆီအဆက်မပြတ်ကျလာတယ် ။ မိန်းမ တယောက်ရဲ့ ရမက်ဆန်ဆန်ပထမဆုံးအနမ်းပါ ….. ငယ်သေးတော့ ဦးမဆောင်နှိုင်ဘူး သူ့ ဦးဆောင်မှု့နောက်ကိုပဲ ကိုယ်ကပါသွားတယ် ။ ကျွန်တော့လို အရိုင်းတယောက်အတွက် သူ့အနမ်းတွေ အရမ်းကြမ်းလွန်းတယ် … ကျွန်တော့ နှတ်ခမ်းတခုလုံး မြုတ်နေသလိုပဲ တချက်တချက် သူ့လျှာကြီး ပါးစပ်ထဲဝင်ဝင်လာတယ် ။ အသန့်ကြိုက်တဲ့ ကျွန်တော် အဲ့အချိန်ရွံရမှန်းမသိဘူး….။ သား မနမ်းတတ်ဘူးပြောတော့ သူက သူနမ်းသလို လိုက်နမ်းပေးတဲ့ ။ နောက် သူ ကျွန်တော့ ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်လိုက်တယ် မြန်မြန်လာ နင့်အမပြန်လာရင်တွေ့သွားလိမ့်မယ်တဲ့ သူလဲ ထမီကို ချွတ်လိုက်တယ် ….. ပင်တီက ၀တ်မထားဘူး ။ ဖရောင်းတိုင်အလင်းက သိပ်တော့မရှင်းဘူး…. ဒါပေမယ့် ပေါင်ကြားထဲ မဲမဲကွက်ကွက်ကြီးတော့ တန်းမြင်နေရတယ် ။ နောက်ပြီး သူ့ အပတ်ထဲက ကျတဲ့ စိမ်းရွှေရွှေအနံ့တွေ တထောင်းထောင်းထနေတယ် ။
( အဲ့အနံ့က ကားပေါ်မှာ တခါ ကြုံပြီးပြီလေ ) ကျွန်တော့ ညီလေးက တောင်နေပြီ….. သူက အနားလာပြီး ” တခါမှမလုပ်ဘူးဘူးမဟုတ်လား ” တဲ့ ။ ကျွန်တော်က ဟင့်အင်း မလုပ်ဘူးဘူး ဆိုတော့ ” လာခဲ့ဆို ” ကျွန်တော့ ညီလေးကို ငုံစုပ်တယ်…. ။ ရင်ထဲ ဖြန်းခနဲပဲ …. ဘယ်လိုကြီးလဲ မသိဘူး…. စိတ်ထဲ သူ မရွံဘူးလားတော့ တွေးမိတယ် ။ လျှာနဲ့ မွှေပြီး ဆွဲဆွဲ နမ်းလိုက်ရင် …. တကိုယ်လုံးကြက်သီးနွေးနွေးတွေ ထကုန်တယ် ။ ခဏ နမ်းပြီး သူက လာခဲ့ ဆိုပြီး သူ ကိုယ်ပေါ်ဆွဲလှဲလိုက်တယ်….။ နောက် ကျွန်တော့ ဟာလေးကို ကိုင်ပြီး သူ့အပေါက်ဝကိုတေ့ပေးတယ် ထည့်လိုက်တော့ စေးထန်းထန်းပဲ တန်းဝင်သွားတယ်….။ သူက တ အ အ နဲ့ ဖြည်းဖြည်းတဲ့ နာတယ်တဲ့… မကြီးရော တခါမှမနေဘူးဘူးလားဆိုတော့ … သူက ငါမနေတာကြာပြီတဲ့ ။ ပထမ ကျွန်တော် ရှေ့တိုးနောက်ဆုပ်မလုပ်တတ်ဘူး …. အဲ့တုန်းက အောကားမကြည့်ဘူးဘူးလေ အရင်က အခွေတွေ ခုခေတ်လိုမပေါသေးဘူး ။ မလုပ်တတ်လုပ်တတ်နဲ့ ကျွန်တော် ရမ်းမှန်းပြီးတော့ထိုးနေတာကို သူစိတ်မရှည်ဘူးထင်တယ် သူ့လက်နဲ့ ခါးကိုကိုင်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုပ်ကျင့်ပေးတယ် ။ ကျင့်ပေးနေရင် ကျွန်တော် အ၀င်အထွက်မှန်လာတယ်…. သူလဲ တအင်း အင်း နဲ့ ညည်းသံတွေထွက်လာတယ် ။ လုပ်နေရင် ကျွန်တော့ကို အောက်ကနေခိုင်းပြီး သူ အပေါ်က တက်ဆောင့်တယ် ။
ကျွန်တော် အကြာကြီးမခံနှိုင်ဘူး သူ့ကိုယ်ကြီးကလေးတယ်လေ….။ ဒီတော့ သူက ဖင်ကုန်းပေးတယ် နောက်ကနေ ကျွန်တော် ဖင်အသားဆိုင်ကြီးတွေကိုင်ကိုင်ပြီး ဆွဲဆွဲလုပ်ရတယ်…. စစ လုပ်ချင်းဆိုတော့ အားသိပ်မပါဘူး အ၀င်အထွက်တောင် မနဲမှန်အောင် ကြိုးစားနေရတာ….။ အားမရလို့ထင်တယ် သူက နောက်ပြန်လဲဆောင့်တယ်……..။ လုပ်နေရင်းနဲ့ စိမ်းရွှေရွှေ ညှီစို့စို့အနံ့ထောင်းထောင်းထနေတယ် အရမ်းကိုယ်နံ့ပြင်းတဲ့ မိန်းမပါ ။ လုပ်နေရင်း သိပ်မကြာဘူးတကိုယ်လုံး တုန်ခါသွားတဲ့ ခံစားမှု့မျိုးကြီးနဲ့ ကျိန်းတက်လာတယ် …. ဒါနဲ့ ကျွန်တော် ရပ်လိုက်ရော မသီတာက လှမ်းမေးတယ် ဘာလို့ရပ်လိုက်တာလဲ …. ဆက်လုပ်လေ တဲ့ မသိဘူး ကျွန်တော့ဟာကြီးအရမ်းကျဉ်လာလို့လို့ …..။ ဟုတ်လား ဒါဆိုလာခဲ့ပြောပြီး လက်နဲ့ကျွန်တော့ကို ရှေ့တိုးနောက်ဆုပ်လုပ်ပေးပါရော နောက်ဆုံး မရတော့ဘူး ကျွန်တော့ အရည်တွေ သူ့လက်ထဲ ပန်းထွက်သွားတယ် ။ လူပျိုဘ၀ရဲ့ ပထမဆုံး ထွက်တဲ့ သုတ်ရည်ပါ ။ ပြီးတော့ အိမ်သာသွားတယ် ၂ယောက်တူတူ…… ရေဆေးပြီးပြန်လာပြီး အိပ်နေကြတယ် ။ အမတို့ ပြန်လာတာတောင် မသိဘူး နောက်ထပ် ညရောက်တော့ အိမ်သာထပ်သွားမယ်တဲ့ သူက ရှူးပေါက်ချင်လို့ဆိုပြီး…. ကျွန်တော် အဖေါ်လိုက်ရတယ် ။
သစ်သားလှေကားနဲ့ ဆင်းရတာ နောက်ဘေးကနေ ရောက်ဘူးရင် သိမှာပါ ကျိုက်ထီးရိုး အရင်နေရာက တောင်စောင်းမှာဆောက်ထားတာလေ အဆင့်လေးတွေနဲ့ ညဆို မှောင်မဲနေတာ…. ရှးပေါက်ပြီး ပြန်တော့ သူက ရှေ့ကနေလှေကားကိုတက်တယ် ကျွန်တော်နောက်ကနေ နှိုက်တယ် နောက်ပြီးသူက လှေကားရင်းမှာပေါင်ဖြဲပေးတယ် ထပ်နေဖြစ်တယ် ။ ခဏပေါ့ …….. လူမြင်မှာစိုးလို့ အကြာကြီး မနေဖြစ်ဘူး ထပ်နေပြီးတော့ အခန်းထဲလာတော့ ကရင်မတယောက်က နံရံအပေါက်ကနေ ဟိုဘက်ခန်းကို ချောင်းနေတယ်။ ကျွန်တော့ကို ဟဲ့ လာကြည့်စမ်း ငယ်လေး တဲ့ … ကျွန်တော်လဲ သူဖယ်ပေးတဲ့ အပေါက်ကို လှမ်းချောင်းတော့ ဟိုဘက်က အတွဲ ဆွဲနေကြတာဗျာ မီးမှိန်မှိန်မှာ သိပ်မသဲကွဲဘူး တဖတ်ဖတ် နဲ့ ဆီးခုံခြင်းရိုက်နေတဲ့ အသံတော့ ပီပီသသ ကိုကြားရတယ်…။ မိန်းမကလဲ ညည်းသံတွေထွက်နေတယ် သိတယ်မဟုတ်လား ကိုကလဲ ဒီမှာ ဆွဲရင်းတန်းလန်းပြန်လာတာလေ ။ ဒီတော့ စိတ်က ထိပ်ရောက်နေပြီ….. ။ အားလုံးအိပ်ကြတယ် ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူး အမက အနားမအိပ်ပဲ မသီတာက ကျွန်တော့ အနားအိပ်တယ် ။
တညလုံး သူ့ကိုနှိုက်နေတာ အရည်ရွဲနေတာပဲ နောက် ဘေးက အသံမကြားအောင် ဖြေးဖြေးခိုးဖုတ်ကြတယ် တညလုံး ကောင်းကောင်းမအိပ်ရဘူး ။ သူက စိတ်ပါတာနဲ့ ကျွန်တော့ ညီလေးကို လာလာ စုပ်တယ် စုပ်တယ်ဆိုတာမှ ဒုတ်ကိုစုတ်ယုံတင်မဟုတ်ဘူး ဒုတ်ကိုစုတ်ပြီးတာနဲ့ ဥကိုပါ အုံလိုက်ငုံပြီးစုပ်တာနော် ပါးစပ်တော်တော်ကျယ်တယ် ။ နောက် လျှာနဲ့မွှေတယ် ပေါင်ကြားတွေကိုလဲ လျှာနဲ့လျှက်ပေးတယ် ။ နောက်နေ့ကျတော့ နေ့လည် ၁၂နာရီလောက်မှ နိုးတယ်ထင်တယ်….။ အိပ်ရာထနောက်ကျလို့ အမ ဆူတာမှတ်မိသေးတယ်…. ၂ညဆက်တိုက် သူနဲ့ ဖုတ်ခဲ့ပြစ်လိုက်တယ်… နောက်ညတော့ အမတို့ သိသွားတယ်ထင်တာပဲ အမကပြန်တဲ့ အထိ ကျွန်တော့ကို စကားကောင်းကောင်းမပြောတော့ဘူး ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မသီတာ ခဏခဏ အိမ်လာလည်တယ် ….။ ကျွန်တော်က သူ့ကို ထပ်မတွေ့ရဲဘူး အမြဲပုန်းနေတယ် ။ ကျိုက်ထီးရိုးက သူမပြန်ခင် ခြောက်လိုက်လို့ပါ ငါ ဗိုက်ကြီးသွားရင် နင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့……….။ သူကနောက်တာဆိုပေမယ့် အဲ့အချိန်တုန်းကတော့ ကျွန်တော် ရူးမတတ်ကို ကြောက်ခဲ့တာ……။ အဲ့တာက လူပျိုရည်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ပါ ။…….ပြီးပါပြီ။